काठेखोलाका अध्यक्षले भने, जनताले मत मार्फत दिएको विश्वास खेर जान दिन्न ! – ebaglung.com
काठेखोलाका अध्यक्षले भने, जनताले मत मार्फत दिएको विश्वास खेर जान दिन्न !
२०७४ जेष्ठ १४, आईतवार २०:३२	Top News, थप समाचार
बागलुङ, २०७४ जेठ १४ । काठेखोला गाउँपालिकामा निर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आइतवार पदभार ग्रहण गरेका छन् । काठेखोला गाउँपालिका ६ सुल्डाडामा सञ्चालित गाउँपालिकाको कार्यालयमा अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापा र उपाध्यक्ष अर्जुनबहादुर खत्रीले पदभार ग्रहण गरेका हुन ।
पदभार ग्रहण गरेपछि आयोजित स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले जनताले मत मार्फत दिएको विश्वास समृद्ध काठेखोला निर्माण गरेर पुरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले सबै राजनीतिक दलहरुसंग समन्वय गरेर गाउँपालिकाको विकासमा अगाडि बढ्ने पनि बताए ।
स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकृतम उपयोग गर्ने लक्ष्य सहित गुरुयोजना निर्माण गरेर काम गर्ने भन्दै उनले विकास निर्माणमा दलीय सम्बन्ध र स्वार्थ नहर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो । उपाध्यक्ष अर्जुनबहादुर खत्रीले जनतालाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न सबैसंग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले केन्द्रीय उर्जा तथा जलस्रोत विभागका सदस्य हिराबहादुर केसी, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य तथा उपाध्यक्ष पदका प्रत्यासी ज्ञानकुमारी श्रीस शर्मा, नेकपा एमाले काठेखोला गाउँपालिकाका संयोजक डिल्लीराज गौतम, नेकपा माओवादी केन्द्रका काठेखोला गाउँपालिका इन्चार्ज कृष्ण थापा, राप्रपाका प्रतिनिधि लिलाधर ढुंगाना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका काठेखोला गाउँपालिका इन्चार्ज लक्ष्मण पुन लगायतले वधाई तथा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रम काठेखोला गाउँपालिका कार्यकारी अधिकृत सीतादेवी न्यौपानेको अध्यक्षता, सहायक अधिकृत चूर्णबहादुर कार्कीको सञ्चालन र वडा नं. ५, ६ र ७ का सचिव मनोज कार्कीको स्वागतमा सम्पन्न भएको थियो ।
यसैबीच गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो वैठकले काठेखोला गाउँपालिकाका ८ वटै वडाका १५÷१५ घर विपन्न परिवारका सदस्यहरुको स्वास्थ्य विमा गरिदिने, ८ वटै वडामा विद्युत महसुल संकलनका लागि घुम्ति काउण्टर सञ्चालन गर्ने, गाउँपालिकाको केन्ददेखि सबै वडामा पुग्ने सडक बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता जिल्ला सदरमुकामबाट वितरण हुदै आएकोमा सम्बन्धित वडा बाटै वितरणका लागि समन्वय गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष थापाले बताए ।